တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသာရ၏ ဗြဟ္မ၀ိဟာရတရား ၄ ပါး။
လူ့လောကမှာ မေတ္တာလောက် တန်ခိုးထက်သောအရာ မရှိပါ။ မေတ္တာတရားဟာ လော
ကကြီးတစ်ခုလုံးတွင် တန်ခိုးအထက်ဆုံးနှင့် စိတ်အချမ်းသာဆုံးတရား ဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းသာမှုတ
အလှူ၏ အကျိုးနှင့် မလှူကောင်းသော ဒါန (၁၀) ပါး
အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဝေသာလီပြည် မဟာဝုန်တောရှိ ကျောင်းကြီး၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူသည်။ ထိုစဉ် သီဟစစ်သူကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားထံ ချဉ်းကပ်၍ အရှင်ဘုရား အလှူ၏အကျိုးကို ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင် ပါသလော-ဟု လျှောက်၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:00 AM 1 comment:
ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ပြုရာ၌ သန့်စင်သောစေတနာ အရင်းခံရန်လိုပါသည်။ တစ်ဖက်သား
အဆင်ပြေ အကျိုးရှိစေဟူသော စေတနာကောင်းတစ်ခုထားရန်လိုပါသည်။ ထိုကုသိုလ်ကောင်းမှု
အတွက် မည်သည့်အမျှော်နှင့် တောင့်တမှုမျှ ပြုစရာမလိုပါ။ အမျှော်ကင်းသော ကုသိုလ်ကောင်း
ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ခေတ် (၅) ပါး ။
ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ခေတ် (၅) ပါး မှာ==
၁။ ၀ိမုတ္တိခေတ် = ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ မဆိတ်သေးသောခေတ်။
၂။ သမာဓိခေတ် = အဘိဉာဏ်ငါးပါး ဈာန်တရားရသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ မဆိတ်သေးသောခေတ်။
ဓမ္မဒူတအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ရာဇအိနြေ္ဒနှင့် စီးတော်မြင်း။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:00 PM No comments:
“ကံ”ဟာ ကြောက်စရာကောင်းသလား၊ “တဏှာ”ဟာ ကြောက်စရာကောင်းသလား..?
“ကံ”ဟာ ကြောက်စရာကောင်းသလား၊ “တဏှာ”ဟာ ကြောက်စရာကောင်းသလားဆိုတော့ တဏှာက ကြောက်စရာကောင်းတာ၊ ခင်ဗျားတို့ကတော့ အကုသိုလ်ကံနှိပ်စက်မှာ ကြောက်လိုက်ကြတာ၊ တဏှာကြောက်တယ်လို့မပါဘူး။
သား၊ လင်၊ ခင်ပွန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေ ခင်တွယ်နေတဲ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ၊ ခွေးအမဲရိုကိုက်တာနဲ့တူတယ်၊ အမဲရိုးရ
ထားတော့ ခွေးကကံကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်၊****** အမဲရိုးက ရိုးတွင်ချဉ်ဆီအနံ့ကလေးနဲ့မို့ အရသာရှိသလို
လိုနဲ့ နောက်ဆုံးပိတ်ကျတော့ ဝါးရင်းမောလာတာနဲ့ပစ်ချလိုက်ရတယ်၊
မဟာဇနကမင်းကြီး တောထွက်ပုံက ထူးဆန်းနေသလားလို့။
မြတ်စွာဘုရားက “ရွံ့နွံကင်းစင်ပြီး အင်မတန်မှ ကြည်လင်သန့်ရှင်းလှပတဲ့ မဟာရေကန်ထဲသို့
သင်တို့တစ်တွေ (ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာနဲ့ကြုံတုန်း)အခွင့်အခါရှိတုန်း ရေဆင်းချိုးကြ၊ သင်တို့ ကိုယ်ခန္ဒာ
မှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ အညစ်အကြေးတို့ကို ကောင်းမွန်စွာ ဆေးကြောသုတ်သင်လိုက်ကြပါ” တဲ့။ ဒီကနေ့
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 2:00 PM No comments:
လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်း မင်းပြုစဉ် ဘုရားလောင်းသည် အလွန်ချမ်းသာသော သူဌေးဖြစ်၏။ သူ၏ အသက်ခုနစ်နှစ်သားသည် အလွန်ဉာဏ်ပညာကြီး၏။ အကျိုးရှိအောင်လည်း ပြုတတ်၏။ ထိုသူဌေးသားသည် တစ်နေ့ သူ၏ ဖခင်အား "ဖခင် --- ချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ" ဟုမေး၏။
မြတ်စွာဘုရား ဟောထားသော လူလေးမျိုးအကြောင်း
လူနဲ့တိရစ္ဆာန် ခြားနားဟန် နှစ်တန်သိရမည်
အိပ၊် စား၊ ကာမ သိရုံမျှ မှတ်ကြလူမပီ
အကုသိုလ်ပါယ် ကုသိုလ်ဆွယ် တကယ်လူပီသည်
လူမပီက အပါယ်ကျ ဒုက္ခမလွတ်ပြီ
လူပီနေက ချမ်းသာရ ရောက်ရနိဗ္ဗာန်ဆီ တဲ့။
တန်ခိုးကြီးဘုရားကို ဖူးဖို့သွားရင် အိမ်မှာပင့်ရှိတဲ့ဘုရား အားနာစရာကြီး။
သင်္ချိုင်းနှင့် တူသော ပုဂ္ဂိုလ် အပြစ် ၅-မျိုး
ရဟန်းတို့ ! သင်္ချိုင်း အပြစ် ၅-မျိုးဟူသည်မှာ -
၂။ မကောင်းသော အနံ့ရှိသည်။
၃။ ဘေးဘျမ်း ရှိသည်။
၄။ သရဲ သဘက်တို့ နေရာဖြစ်သည်။
၅။ လူပေါင်းများစွာ၏ ငိုကြွေးရာဖြစ်သည်။
အညှီ အဟောက်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သလဲ?
တရားသဖြင့် ရအပ်သော မြက်သီးစပါး ဆောင်းမေခါးပွင့်သဏ္ဌာန် အနှံ ရှိသော စပါးအလေ့ကျပေါက်သော ပဲနောက်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ သစ်ရွက်စိမ်းကိုလည်းကောင်း၊ သစ်မြစ်သစ်ဥကိုလည်းကောင်း၊ သစ်သီးဝလံကိုလည်းကောင်း စားသုံးကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့သည် ကာမကို အလိုရှိခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ချွတ်ယွင်းသော စကားကို မဆိုကြကုန်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:53 AM No comments:
လောကမှာအကောင်းဆုံးသောအရာဟာ ဘာလဲမေးလိုက်ရင် လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးအရာကိုပဲ အကောင်းဆုံးအရာလို့ သတ်မှတ်ကြမှာပါ။ ဒါက ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်အနေနဲ့ ပြောတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်အနေနဲ့ မဟုတ်ပဲ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးအရာ သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာ၊ မကြိုက်တာကို ပဓာနပြုလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ပင်ကိုသဘာဝအရ ကောင်းတာ၊ မကောင်းတာကိုပဲ ပဓာနပြုရပါမယ်။
ကိလေသာ (၁၁) ပါးမှာ။
အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မမေးချင်တာလေးရှိလို့ပါဘုရား အရှင်ဘုရားဖြေပေးမယ်ဆိုရင် တကယ်ကို
ဂင်္ဂါမြစ်ဘေး တစ်ခုသော ကုက္ကိုပင်ရင်းတွင် သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် မြတ်စွာဘုရားရဲ့
ရှေ့မှောက်သို့ မျက်ရည်ပြိုင်ပြိုင်စီးကျ ငိုကြွေးနေတဲ့ နဂါးမင်းကြီး ရောက်လာပါတယ်။
“ကံ”ဟာ ကြောက်စရာကောင်းသလား၊ “တဏှာ”ဟာ ကြောက်စရာကောင...
တန်ခိုးကြီးဘုရားကို ဖူးဖို့သွားရင် အိမ်မှာပင့်ရှိတ...
ဆွမ်းခံခြင်းသည် တောင်းခံခြင်းလော နှင့် ဆွမ်းမခံအပ်...